WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood). waxaa qoray: Dr.Xuseen Sheekh Axmed (kaddare)
Home » Qormooyinka » WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood). waxaa qoray: Dr.Xuseen Sheekh Axmed (kaddare)	WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood). waxaa qoray: Dr.Xuseen Sheekh Axmed (kaddare)
29/04/2017	180 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa. WAASUGE IYO WARSAME
Intaas ka dib wuxuu Waasuge Raggii usoo jeediyey su’aalo ka sameysan tusaalooyin ku saabsan dhibaatooyinka qabyaaladdu horumarinta nolosha umadda, laakiin, uu asaga dareenkiisu ku qotamay amaba u arkayay umuuro miyiga u gaar ah, wuxuuna yiri:
-Weligiin ma aragteen Wiil reer ku madi ahaa oo loogu aaray nin uusan dilin, kana war hayn meel lagu dilay, qabiilnimo daraaddeed.?
-Weligiin ma aragteen Wiil iyo Gabar soomaaliyeed oo isjeclaaday, lana yiri isma guursan kartaan, maxaa yeelay, isma gaydaan, qabiilnimo daraaddeed?
-Weligiin xoolihiinnoo ooman nin Ceel biyo mayidinka diiday nin aan markaas u baahanyn oo aan waxba ku qasbayn qabiilnimo daraaddeed?
-Weligiin ma aragteen nin soomaaliyeed oo soomaali kale ku yiri ‘Dhulka nooga guura annagaa iska lehe, qabiilnimo daraaddeed?
-Weligiinse ma aragteen iyadoo doorasho siyaasi ah la galay oo nin ragannimo iyo cilmi isku darsaday dhacay, lana doortay nacas jaahil ah, qabiilnnimo daraaddeed.?
Intuusan Waasuge dhammayn tusaalooyinkiisii murtida lahaa ayaa Qadadii la keenay. Si weyn ayey dadkii ugu khushuuceen erayada dareenka leh ee uu Waasuge ku faaqiday ilaha dhibaatooyinka qabiilnnimo ka aloosnaayeen. Intii cuntada loo faraxalanayey waxaa dadku si xiiso leh ugu bulaamayey tusaalooyinkii Waasuge. Isla markiiba Dirir ayaa inta saacadda fiiriyey Raadiyaha daaray, waxaana ka socday barnaamij ku saabsan qoridda Af soomaaliga. Waxaa markaa Gabay ka tirinayey Sheekh Caaqib Cabdullaahi, asagoo lahaa:
Afku qaaya weynaa kolkii, qorista loo yeelay
Fartu qiima badanaa kolkii, Dhoobka laga qaaday
Qalqallooc xuruuf aan lahayn, qaladna loo diiday
Sadarradu qurxoonaa kolkii, qalinka loo fiiqay.
Waasuge iyo Warsame intii ay magaalada joogeen, waxyaalo badan oo qoridda Af-soomaaliga ku saabsan ayey Raadiyaha ka maqleen, sida qudbooyin, gabayo iyo heeso intaba. Warsame wuxuu gabaygaas ku xasuustay, Raggii ay weelka wax ku cunayeenna u mariyey gabay uu horey uga maqlay Raadiyaha, kaasoo uu tiriyey Cabdulle Raage, ahaana:
Labaatan iyo laba aamustiyo, shaqal irmaaneeya
Amraniyo tilmaame iyo gudbe, aade iyo jooje
Isku dare xiriiriye falkaab, erayadeenniiya
Ebyaniyo haddaan magacuyaal, ku arkay Joornaalka
Mar haddii Afkeygii la qoray, Aabbe iyo Hooyo
Mar haddaan amaahsigi ka baxay, lagu agoontoobay
Amiirnimo sin iyo garab jirteey nagu abuureene.
Afafkaa qalaad iyo maxaa Eragta ii dhiibtay
Anaa macalinoo raba dad loo, furo iskuulaade.
Markii la qadeeyey ayaa nin dhallinyaro ah oo Barnaamijkii Raadiyuhu talo ku dhaliyey, uu si deggan labada Odey su’aal ugu jeediyey, wuxuuna yiri “Waasuge iyo Warsamow, waxaad nooga warrantaan ra’yiga aad ka qabtaan qoridda Af-soomaaliga iyo sida uu warkeedu idiin soo gaaray.”
Waxaa jawaabtii qaatay Warsame oo yiri “Sida runta ah Reer miyiga waa looga wanaagsanyahay Waxbarashada, maxaa yeelay, waa dad aan meel ku negeyn oo had walba raadinaya Daaq iyo Biyo. laakiin waxaan kuu sheegayaa inayan maskaxada Reer miyigu sida tiinna u qaysanayn oo aan aaminsanahay in Af-soomaaligu yahay: lama huraan waa Cawska jiilaal. Sideedana waa ceeb aan laga waaqsan in umad gob ah oo haddana ku dhaqmeysa waxyaalo Afku ka mid yahay oo ay ka dhaxashay Shisheeyihii gumeysan jiray. Run ahaantii, sababaha dhibaatooyinkaa dhaliyey waxay naga soo galeen xagga Reer magaalka, mana ahan kuwo loo garaabi karo, waxaana sideedaba ay soomaalidu ku maahmaahdaa:
“Amaano kugu raagtay
inaad leedahaa la moodaa;”
La soco Qeybta 24-aad, Berri haddii Alle idmo. WAXAA QORAY:
Previous: Xildhibaanada Soomaaliya oo maanta warbixino ka dhageysanaya qaar ka mid ah Gudiyada Baarlamanka.
Next: Akhriso: Wararkii Ugu Dambeeyay ee Doorashada Madaxweynaha Galmudug